Wararka - CUDURKA CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)
Coronaviruses waa qoys fayras leh oo sababi kara cudurro sida hargabka caadiga ah, cillad daran oo daran oo xagga neefsashada ah (SARS) iyo cilladda neefsashada ee Bariga Dhexe (MERS). Sannadkii 2019, fayras cusub oo loo yaqaan 'coronavirus' ayaa loo aqoonsaday inuu yahay sababta cudur ka dillaacay dalka Shiinaha.
Fayrasku hadda waxaa loo yaqaannaa cilladda daran ee neefsashada ee daran coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Cudurka uu sababo waxaa lagu magacaabaa cudurka coronavirus 2019 (COVID-19). Bishii Maarso 2020, Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) waxay ku dhawaaqday in cudurka 'COVID-19' uu ka dilaacay faafitaan.
Kooxaha caafimaadka bulshada, oo ay ku jiraan Xarumaha Mareykanka ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) iyo WHO, ayaa kormeeraya cudurkan faafa isla markaana cusbooneysiinta ku soo qoraya boggooda internetka. Kooxahan ayaa sidoo kale soo saaray talooyin ku saabsan kahortaga iyo daaweynta xanuunka.
Calaamadaha iyo astaamaha cudurka coronavirus 2019 (COVID-19) waxay u muuqan karaan labo ilaa 14 maalmood kadib soo-gaadhista. Markan ka dib soo-gaadhista iyo ka hor inta aanad calaamado yeelan waxaa loo yaqaan muddada fiditaanka. Calaamadaha iyo astaamaha caadiga ah waxaa ka mid noqon kara:
Calaamadaha ugu horreeya ee COVID-19 waxaa ka mid noqon kara dhadhamin la'aan ama urin.
Indho casaan (conjunctivitis)
Liiskani ma aha mid loo wada dhan yahay. Calaamadaha kale ee aan caadiga ahayn ayaa la soo sheegay, sida finan, lallabo, matag iyo shuban. Carruurtu waxay leeyihiin astaamo la mid ah kuwa waaweyn guud ahaanna waxay leeyihiin jirro khafiif ah.
Darnaanta calaamadaha COVID-19 waxay u dhexeeysaa mid aad u fudud ama daran. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay yeeshaan calaamado yar, dadka qaarna malaha wax calaamado ah haba yaraatee. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay la kulmaan astaamo ka sii daraya, sida neefta oo yaraata iyo oof-wareenka, oo sii xumaanaya usbuuc ka dib markay astaamuhu bilowdaan.
Dadka da'da ah waxay halis sare ugu jiraan jirro halis ah oo ka timaadda COVID-19, halistuna waxay sii kordheysaa da'da. Dadka qaba xaalado caafimaad oo daba dheeraaday sidoo kale waxay yeelan karaan halista sare ee cudur halis ah. Xaaladaha caafimaad ee halista ah ee kordhiya halista jirro halis ah ee ka timaadda COVID-19 waxaa ka mid ah:
Cudurada halista ah ee wadnaha, sida wadnaha oo istaaga, cudurka halbowlayaasha wadnaha ama wadnaha iyo wadnaha
Cudurka sanbabada ee joogtada ah (COPD)
Nooca 2aad ee sonkorowga
Difaacida jirka oo daciif ka ah xubinta jirka lagu beero
Xaaladaha kale waxay kordhin karaan halista jirro daran, sida:
Cudurada sanbabada ee joogtada ah sida cystic fibrosis
Xaaladaha maskaxda iyo xaaladaha neerfaha
Difaaca habka difaaca jirka ee dhuuxa dhuuxa, HIV ama daawooyinka qaar
Nooca 1aad ee sonkorowga
Liiskani ma aha mid loo wada dhan yahay. Xaaladaha kale ee caafimaad ee hoose waxay kordhin karaan halista cudurka halista ah ee ka timaadda COVID-19.
Goorta la arko dhakhtar
Haddii aad leedahay calaamado COVID-19 ama aad la xiriirtay qof laga helay COVID-19, la xiriir dhakhtarkaaga ama rugta caafimaadka isla markiiba si aad uga hesho talo caafimaad. U sheeg kooxdaada daryeelka caafimaadka calaamadahaaga iyo soo-gaadhista suurtogalka ah ka hor intaadan tegin ballantaada.
Haddii aad leedahay calaamado iyo astaamo degdeg ah COVID-19, raadi daryeel isla markiiba. Calaamadaha degdega ah iyo astaamaha waxaa ka mid noqon kara:
Xabad xanuun ama cadaadis joogto ah
Awood la'aanta in la soo jeedo
Dibnaha buluuga ama wajiga
Haddii aad leedahay calaamado ama astaamo COVID-19, la xiriir dhakhtarkaaga ama rugta caafimaadka si aad u hagto. U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad qabtid xaalado caafimaad oo kale oo daba dheeraada, sida cudur wadne ama sambabada. Inta lagu jiro aafada, waxaa muhiim ah in la hubiyo in daryeel caafimaad loo heli karo kuwa aadka ugu baahan.
Infekshinka cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' (xanuun daran oo daran neefsashada coronavirus 2, ama SARS-CoV-2) ayaa sababa cudurka coronavirus 2019 (COVID-19).
Feyrasku wuxuu umuuqdaa inuu si fudud ugu dhex faafo dadka, inbadanna waa lasii ogaanayaa waqti kadib sida uu ugu faafo. Xogta ayaa muujisay inay ku faafto qof ilaa qof dadka ku dhow dhow (qiyaastii 6 fuudh, ama 2 mitir). Feyrasku wuxuu ku faafaa dhibco neefsasho ah oo la sii daayo markii qof fayraska qaba qufaco, hindhiso ama hadlo. Dhibcahaani waa la neefsan karaa ama waxay ku degi karaan afka ama sanka qofka u dhow.
Waxa kale oo uu ku faafi karaa haddii qofku taabto dusha fayrasku saaran yahay ka dibna uu taabto afkiisa, sankiisa ama indhihiisa, in kasta oo tan loo aqoonsanayn inay tahay habka ugu weyn ee uu ugu faafo.
Waxyaabaha halista u ah COVID-19 waxay umuuqdaan inay kamid yihiin:
Xiriir dhow (6 fuudh, ama 2 mitir gudahood) qof qaba COVID-19
Uu ku qufaco ama ku hindhiso qof cudurka qaba
Inkasta oo dadka badankood ee qaba COVID-19 ay leeyihiin astaamo dhexdhexaad ama dhexdhexaad ah, cudurku wuxuu sababi karaa dhibaatooyin caafimaad oo daran wuxuuna dadka u horseedi karaa dhimasho. Dadka waayeelka ah ama dadka qaba xaaladaha caafimaad ee joogtada ah waxay halis weyn ugu jiraan inay si halis ah ugu bukoodaan COVID-19.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid noqon kara:
Oof wareenka iyo dhibaato neefsashada ah
Fashalka xubinta ee dhowr xubnood
Xanuun daran oo sambabaha ah oo sababa qadar yar oo oksijiin ah inuu ku maro dhiiggaaga ilaa xubnahaaga (xanuun daran oo neefsasho daran)
Dhaawac daran oo kilyaha ah
Infekshannada fayraska iyo bakteeriyada ee dheeraadka ah
In kasta oo uusan jirin tallaal la heli karo oo looga hortago COVID-19, waxaad qaadi kartaa tallaabooyin aad ku yareyneyso halista cudurka. WHO iyo CDC waxay ku talinayaan in la raaco taxaddarradan si looga fogaado COVID-19:
Ka fogow munaasabadaha waaweyn iyo isu imaatinnada ballaaran.
Ka fogow xiriir dhow (qiyaastii 6 fuudh, ama 2 mitir) qof kasta oo jiran ama leh calaamado.
Guriga joog sida ugu macquulsan oo masaafada u dhexeyso naftaada iyo dadka kale (qiyaastii 6 fuudh, ama 2 mitir), gaar ahaan haddii aad leedahay halista sare ee cudur daran. Maskaxda ku hay in dadka qaarkii ay yeelan karaan COVID-19 oo ay u faafiyaan dadka kale, xitaa haddii aysan lahayn astaamo ama aysan ogeyn inay leeyihiin COVID-19.
Ku dhaq gacmahaaga inta badan saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbidhiqsi, ama isticmaal nadiifiyaha gacmaha oo alkolo leh oo ay ku jiraan ugu yaraan 60% aalkolo.
Ku dabool wejiga maro wajiga lagu xidho ee meelaha dadweynaha, sida dukaanka cuntada, halkaas oo ay adag tahay in laga fogaado xiriir soke oo lala yeesho dadka kale, gaar ahaan haddii aad ku sugan tahay aag ay ku faafayaan bulshada. Kaliya isticmaal maaskarada dharka aan dawada lahayn - maaskarada qalliinka iyo N95 neefsadayaasha waa in loogu talagalay bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka.
Ku daboolo afkaaga iyo sankaaga xusulkaaga ama cadkaaga markaad qufacayso ama hindhisayso. Iska tuur unugyada la isticmaalay. Dhaq gacmahaaga isla markiiba.
Ka fogow wadaagista suxuunta, muraayadaha, tuwaalada, gogosha iyo alaabada kale ee guriga haddii aad jiran tahay.
Nadiifi oo jeermis ku nadiifi meelaha dusha sare ee taabashada, sida albaabbada albaabbada, shidmooyinka nalka, elektarooniga iyo miiska, maalin kasta.
Guriga ka joog shaqada, dugsiga iyo meelaha dadweynaha haddii aad jiran tahay, inaad daryeel caafimaad mooyee mooyee. Ka fogow gaadiidka dadweynaha, tagaasida iyo wadaagga gaadiidka haddii aad jiran tahay.
Haddii aad leedahay xaalad caafimaad oo daba-dheeraatay oo aad u yeelan karto halista sare ee cudur halis ah, ka hubso dhakhtarkaaga siyaabo kale oo aad isaga ilaalin karto.
Haddii aad qorsheyneyso inaad safarto, marka hore ka hubi boggaga CDC iyo WHO wixii cusbooneysiin iyo talo ah. Sidoo kale raadi latalin kasta oo caafimaad oo laga yaabo inay ku taal meesha aad qorsheyneyso inaad ku safarto. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad la hadasho dhakhtarkaaga haddii aad leedahay xaalado caafimaad oo kaa dhigaya inaad u nuglaatid caabuqyada neef-mareenka iyo dhibaatooyinka.